Author : दयाकृष्ण राई
Published on : July 06, 2011
शीर्षकमा उद्धृत गरिएको शव्द अत्यन्तै प्रचलित नेपाली लोकोक्ति हो । तर मलाई कहिल्यै पनि रातो राम्रो लागेन । अहिले नेपाली जनमानसमा रातो रङ्गको चर्चाले सञ्चार जगत तात्तिएको छ । र यो रातो भन्ने शव्दले स्मृतिपट भित्रको धुमिल स्मरणहरूलाई केलाएर दृष्टिगोचर गर्न बाध्य गरायो । बेलायती साम्राज्यले आफ्नो उपनिवेशलाई सुम्पिएर मलायाबाट हात धोएर हङकङमा गोर्खा सैनिकको ब्रिगेडलाई स्थाइ रुपमा खडा गर्‍यो, हङकङ आफ्नो उपनिवेश रहुञ्जेलसम्म । हाम्रा बाजे र बाउको पालासम्म मलायाको लाहुरे भन्ने प्रचलन थियो हाम्रो गाउँ घरमा । हाम्रो पालामा हङकङमा स्थाइ रुपमा बस्ने भएकोले हङकङको लाहुरे भन्ने गर्थे हामीलाई र कतिपयले त मलायाकै पनि भन्ने गर्दथे । समय सापेक्ष हालै त युकेको लाहुरेमा परिवर्तन भइसकेको छ । सन् १९८० को मध्यतिर सबै ब्रिगेड अफ गोर्खाजका गोर्खालीहरू र तिनका परिवार हङकङमै भएकोले त्यहाँका चाइनिजहरूले गोर्खाहरूले चाहिने भौतिक सामग्रीका पसलहरू खोलेर नेपाली भाषा पनि सिकेर उनीहरू आफ्नो व्यापारिक प्रवर्द्धनमा तल्लीन थिए । त्यसताका अति नै प्रचलित पसलहरूमा ˆयानलिङ्गको वानप्राइज र आलीको साडी दोकान । स्याङ्गसुइको छसय बयालिस दोकान । युनलोङ्गको कान्छीको घडी दोकानहरू थिए । सैनिक क्याम्पको नजिक थुप्रै साना मसिना पसलहरू थापेर बस्ने त अनगिन्ती थिए । नेपाली ग्राहक हेर्नसाथ जानी नजानी उनीहरू नेपाली भाषा बोलेर ग्राहकलाई आकर्षण गर्दथे । त्यति भित्रमा सबै भन्दा उत्कृष्ट र स्पष्ट नेपाली भाषा बोल्न सक्नेमा फ्यानलिङ्गको आलीको साडी दोकानकी दिदी थिइन् । र उनी जस्तै राम्ररी बोल्नेमा ��"केनी बजु पनि त्यत्तिकै स्पष्ट बोल्थिन भने उनी त झन हिन्दी पनि स्पष्ट बोल्थिन । उनी चाही साडी, लुङ्गीहरू देखि लिएर सबै घुम्ति पसल लिएर प्रत्येक गोर्खा क्याम्पहरू चहार्थिन ।त्यही भएर होला गोर्खा दिदीबहिनीहरूद्वारा उनको नाम नै ��"केनी राखिएको होला । मलाई लाग्छ उनीहरू जतिको स्पष्ट नेपाली म पनि बोल्न जान्दिन् ।<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
जब छुट्टी नेपाल जानका लागि आफ्नोनाम निस्कन्छ अनि हामी तिनै पसलहरूमा गएर आफ्ना घर परिवार आफन्तजनको लागि सामानहरू किन्न जान्थ्यौं । आलीको साडी दोकानमा गएर दिदी राम्रा-राम्रा साडीहरू देखाउनु होस् त छुट्टीमा लानको लागि भन्ने बितिकै ती चाइनिज दिदीले सरर नेपाली भाषामा साडीको नाम, प्रकार, गुण, बैगुण, सस्ता, महङ्गा, कस्तो रङ्गको साडीमा कस्तो रङ्गको पेटीकोट र व्लाउज उपयुक्त देखिन्छ आदि ईत्यादि विवरण दिने गर्दथिन । जब उनी रातो रङ्गको साडीको विवरण दिन थाल्थीन म उनलाई बिचमै रोकेर दिदी मलाई रातो रङ्गको साडी मन पर्दैन भन्ने गर्थे । उनी पनि कहाँ कमकी थिइन र ! भाई तपाई कस्तो कुरा गर्नु हुन्छ तपाईलाई मन नपरेर कहाँ भो र यो त दिदी बहिनीलाई पो मन पर्नु पर्छ त । रातो राम्रो गुलियो मीठो भनेको थाहा छैन ? त्यसपछि म अवाक हुन्थे र मनपर्ने रङ्गका साडीहरू छानेर प्याक गर्न लगाउँथे र हिँडथे ।
रातो रङ्गको कुनै पनि चीज मन नपर्ने म जब बेलायत आएँ, गोर्खा दाजुभाइहरू रातो रङ्गको सन्दर्भ मै जहिले पनि केन्द्रीत रहने अथवा भनौ रातो पासपोर्टको कुरा गरेर कानै पाकीसकेको छ । रातो पासपोर्ट भन्नाले बेलायती रहदानी हो । कतिपयले मेरो रातो पासपोर्ट निकालि सके भनेर गर्व गरिरहेको र कतिपयले निकाल्ने प्रकृयामा भएको बताउछन् । मलाई त यो पहिल्यै देखि रातो राम्रो नलागेर होला यो रातो पासपोर्टको कुरा निस्कियो कि झन्झट लागेर आउन थाल्छ । बेलायतका नेपालीहरूलाई त रातो रङ्गको पासपोर्टले ततायो-ततायो, अहिले नेपाली जनमानसमा पनि रातो पासपोर्टको विषयले तहल्का मच्चाएको छ । नेपालको रातो पासपोर्ट भन्नुको अर्थ कुटनीतिक रहदानी हो । अहिले यहिँ रातो पासपोर्टको व्यापार खुव फस्टाएको छ । नेपालमा सिजन अनुसारको व्यापार गर्नसके व्यपारीहरू रातारात नवधनाढ्य बन्न सक्छन । पहिला-पहिला काठमाण्डौमा जग्गा व्यपार फस्टियो र केहीबर्ष पछि ठप्प भयो । जसको स्थान हङकङ आइडीले लियो । र मरेको मान्छेको आइडी समेत बिक्री भएपछि मरेको मान्छे पनि चिहानबाट उठाएर ल्याउने चमत्कारिक कार्यले हङकङ सरकार पनि आश्चर्य चकित परेको सुन्नमा आयो । कारण अहिलेसम्म हङकङमा जन्मेको नेपाली मरेको तथ्याङ्क नै पाउन सकेन शतप्रतिशत हङकङ पुगे । फेरि जग्गा व्यापार गत सालसम्म उर्लियो र फेरिपनि ठप्प भएपछि अहिले रातो पासपोर्टको जादुमय व्यापार आरम्भ भएको छ नेपालमा । सभासदहरू संविधान सभाको बैठकमा उपस्थित पनि छन् तर तिनै सभासदहरू अष्ट्रेलियामा सेमिनारमा पनि भाग लिन गएर फर्किएका छैनन् ।
एमालेका सभासद नारदमुनी राना र फोरमका सभासद शिवपुजन राय यादवले त्यही गरिरहेका छन् । एउटै व्यक्तिले दुई फरक देशमा कामगर्न सक्ने, सोह्रसय गोपिनीहरूमा एकै साथ पुग्न सक्ने कृष्ण लिला जस्तै अलौकिक शक्ति भएको सभासदहरू गणतान्त्रिक नेपालले पाएपछि देश सिङ्गपुर मात्रै कहाँ हो र एकदुइ बर्ष भित्रै स्वीटजरल्याण्डलाई उच्छिन्ने छ । हेरौं यो व्यपारले कतिञ्जेल धान्ने हो नेपाली बजार । फोरमकै सभासद बिपी यादव र नेपाल जनता दलकी सभासद गायत्री साहको रातो पासपोर्ट बिक्री काण्ड सेलाउन नपाउँदै यस व्यापारले निरन्तरता पाएको छ ।
हुन त कतिपय मित्रहरूले ता दयाकृष्णेले स्यालले अङगुर तितो भने जस्तै तैले पाएपो राम्रो लाग्छ देखेको त छैनस् भन्नुहोला । नेपालको रातो पासपोर्टको लागि भने पक्कै पनि योग्य छुइन तर बेलायतको लागि भने योग्य भइसकेको अवस्था छ । त्यही रातो राम्रो नलागेर नै चुपचाप खल्ती भित्र हरियो पासपोर्ट च्यापेर बसेको छु भन्न पर्ला । नेपाली रातो पासपोर्ट जम्मा एकपटक नजिकबाट हेर्ने मौका मिलेको थियो । सन् १९९५ मा बेलायती गोर्खा सेनामा सेवारत हुँदा आफ्नै पैसाले टिकट लिएर तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको विमानमा एक महिनाको बिदामा नेपाल गएको थिएँ । त्यस बिमानमा एकजना इञ्जिनियर नेपालबाट अब्जरभेसन टूरमा बेलायत आएका रहेछन् र हामीसँगै एउटै उडानमा काठमाण्डौ त्रिभुवन बिमानस्थलमा अवतरण भयौं । ती इञ्जिनियर मित्र मेरो आगाडि लाम लागेका थिए । अध्यागमनका कर्मचारीले सर तपाईको कुटनीतिक पासपोर्टको यहाँ होइन तोकिएको काउन्टरमा जानु होला भनेपछि ती इञ्जिनियर मित्र जङ्गिएर उनको पासपोर्ट पछार्दै त्यही इन्ट्रीछाप हान्न जिकीर गरे र अन्तमा ती कर्मचारीले तपाईहरूको सुविधाहरू फरक भएर तपाईकै लागि पठाएको ठीकै छ भनेर छाप हानी दिए । इञ्जिनियर मित्रले यही मेरो ह्याण्डव्याग बाहेक अरु केही पनि छैन म किन त्यहाँ जाने भनेर अध्यागमन पार गरे । त्यहीबेला रातो पासपोर्ट नजिकबाट हेर्ने मौका मिलेको थियो ।
मैले करिव दुइ दशक अघि नेपाली रातो पासपोर्ट हेर्ने मौका पाएको थिएँ र त्यहीँ बेलाको तत्कलीन शाही नेपाल वायुसेवा निगममा यात्रु भएर गएको बारे यहाँहरूलाई माथि उल्लेख गरिसकेको छु । त्यसबेला आरम्भ भएको शाही नेपाल वायुसेवा निगम बिचमा आएर कसरी विलय भयो ? शाही त गणतन्त्रपछि विलय हुने नै थियो तर नेपाल वायु सेवा निगमको उडानमा हामी नेपालीहरू निरन्तर यात्रा गर्नु पर्ने हो तर खोइ त्यो वायुसेवा निगम् ? हामी त अहिले ईण्डियन एयरलाइन्स र गल्फ र कतार लगायत सबै विदेशी विमानमा पो यात्रा गरिरहेका छौं । सन् १९९६ मा बेलायती सैनिकबाट अवकाश लिएर जाँदा पनि त्यही वायुसेवा निगमबाट नै नेपाल फर्केको थिएँ । जुनबेला ग्याटविक विमानस्थलमा विमानको भर्‍याङ्ग चढेर विमान भित्र प्रवेश गर्नेबेला ढोकामा नेपाली विमान परिचारिकाहरू नेपाली पहिरनमा नमस्कारकासाथ यात्रुहरूलाई स्वागत गरिहेका हुन्थे । उडान आरम्भ भएपछि अङ्गे्रजी र नेपालीमा मीठो उदघोषणले वातावरण नै नेपालीमय हुन्थ्यो । ग्याटविक विमानस्थलबाटै नेपालको सम्झना दिलाउने गर्दथ्यो । अहिले त गल्फ र कतार एयरमा चढन बित्तिकै उदघोषण पनि अरबियन भाषामा रेहेला र सेहेला कति खल्लो अनुभव हुने गर्दछ ।
भाडामा लिएका विमानहरू दुइवटा जति थिए होलान र चलिरहेकै थियो बेलायतका लागि वायुसेवा निगम् । अहिले त आफ्नै विमान किनेर नौ दशवटा विमान हुनुपर्ने किन बिचमा तुहियो भनेर सोध्दा उही व्यापार गर्ने प्रकणले भन्ने सुनें । तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले जब सेवा सञ्चालन गर्‍यो, कुखुराको माउपोथीले चल्ला कोरलेझै नक्कली विमान परिचारिका कोरलेर बेलायतमा ��"राल्ने र पैसा असूलेर व्यापार गर्ने । त्यही प्रकरणले बिचमा तुहिएर हामी नेपाली टुहुरोझैं अन्य देशको विमान चढेर स्वदेश फर्किनु पर्ने दशा आइपर्‍यो । हुन त यसको तथ्य प्रमाण बिना सुनेको भरमै लेखिरहेको छु । तर ज्वलन्त उदाहरण रातो पासपोर्ट नै अहिले हाम्रो सामु छ त्यसैले यो त सामान्य रुपमा हुने बिषय हो, सवूत प्रमाण नै किन चाहियो र ! यस्ता व्यापारहरू हुँदै अहिले रातो पासपोर्टको व्यापार मौलाउन थालेको छ हेरौ यी व्यपारी सभासदहरूको लागि रातो पासपोर्ट रातो राम्रो गुलियो मीठो नै बन्ने हो कि रातो नराम्रो गुलियो तितो हुने हो भविश्यले बताउला ।